Ndiani Ari Kukudzivirira? | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 7, 2011 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Rimwe rematambudziko atinawo nesarudzo izvozvi nderekuti akarebesa. Kuedza kutarisira mukwikwidzi kuti azviite pamusoro pegore asina kuzviita iye anotaridzika senutukesi hazviite. Zvakangoomera Mutungamiriri ... munhu wese achishamisika kuti ndiani ari kumhanya panzvimbo ino sezvo ari munzira nguva dzese achiedza kusarudzwa. Uye chechipiri chega chega chega chega chega chega chega chetauro yega yega chiri kusekedzwa nekufa kusvika vezvenhau vedu vawana imwe yemhando yechinhu chekukwiridzira. Zvinosemesa.
Ini handisi mukwikwidzi, asi kuzviisa iwe ipapo mumasocial media kunovhura iwe kuti uongorore zvakafanana. Sezvaunoramba uchinyora, tweet, kugadzirisa uye kugovana, iwo mikana yekuti iwe ugadzire wega kubva pauri zvinosvika zana muzana. Kana iwe usati wakamboita, iwe hausi kungoisa moyo wako uye chishuwo mune izvi. Ndinonamira tsoka yangu mumuromo nguva dzose. Rimwe zuva ndichaudza vanhu kuti varipo hapana mitemo kune vezvenhau, ipapo ndicha chema kune wese munhu paGoogle + nenzira yavari kushandisa nayo.
Vanhu vazhinji (uye makambani) vaizonetsekana nepfungwa yekubatwa mukukonana kwakadai.
Sei? Ini handisi kuzorega kutya kwekutarisa kunge jeki kuchinditadzisa kutaura ini. Kana iwe usingazvifarire, se Chris Brogan akataura… Unogona kundisiya kubva mudenderedzwa rako.
Ndakasangana nevanhu vaviri vanoshamisa paBlogWorld Expo uye ndinoda kutaura nezvavo pano. Imwe yaive Aisha Tyler, munhu ane matarenda mazhinji (kusanganisira nekukurumidza wit wandati ndamboona) handigone kana kuanyora.
Mushure memashoko akakosha, ndakaitika kuti ndakagara pasi Miss Lori, mukurumbira anozivikanwa nebasa rake paPBS uye nekuenderera mberi nebasa mumasocial media, munhau, uye mudzidzo. Takatora maawa tichitaura… uye ndakatokomborerwa nekugovana tekisi naMiss Lori mangwanani ano! Ini handikwanise kana kuisa mumazwi kushamisa kwaaive aita kutaura naye.
Zvinonakidza… iyo vanhu vaviri izvo zvakagadzira isingakanganike pandiri vaive vakapenya, vakasimba, vatema, vakadzi uye vakanaka. Zvino - usati watanga kukanda majee ako akasviba eharahwa, ndinokugura ipapo. Yakanga isiri iyo runako yakandiwana… kwaive kushinga kunotyisa kwevakadzi vaviri ava. Ndakafunga kuti zvainge zvakaoma kwandiri kuti ndibude asi handigoni kana kufungidzira zvinhu zvese zvaigona kunge zvakabata Aisha naMiss Lori kumashure. Izvo hazvina kuvadzora pasi. Vanga vachipisa nzira Kwose kwose vaenda. Uye zvemagariro midhiya ndicho chinotevera chinhu chekuti vakunde (ivo vatove munzira yavo!).
Handina kumira kufunga nezvazvo.
Chimwe chezvinhu chakasimudzira kukura kwangu muiyi indasitiri makore mashoma apfuura kwave kugona kwangu kushanda kupfuura kutya kwekutadza. Ini ndakangomira kuteerera vanhu vakandiudza kuti handikwanise, ndaisatenda kana ndaisafanira. Ndakarega kuteerera kune vandaishanda navo, shamwari uye kunyange mhuri. Ndakaenda kumberi chero zvakadaro. Vanhu… Ndine makore makumi mana nematatu! Ndiyo nguva yakareba yakanditora kuti ndikunde uye ndifambe mberi. Kunyangwe nanhasi, kana mumwe munhu achiti vanhu vari kutaura kumashure kwangu kana ivo vanogovana runyerekupe, ini handidzokere - ndinorwisa. Kutya kwakandiremadza kwemakore makumi maviri. Yakaba inokwana hafu yehupenyu hwangu, zvese zvemunhu uye zvehunyanzvi. Ini handisi asingatyi, asi handifi ndakarega kutya kuchindimisa zvakare.
Izvo zvakati… Ndiri mukadzi akazara achienzaniswa naAisha naMiss Lori. Ivo vaviri njiva mumasocial media vasina boka rekutsigira (ini ndaive ndakakomberedzwa nemageeks). Ivo vaviri vakauya kubva kuchinyakare midhiya kwaigara pasocial media kwaive (uye kuri) kuchiri kutariswa nekusahadzika. Ivo vaviri vakadzi, patsika pane mukaha uripo nevakadzi uye tekinoroji. Vaviri vaive nerunako rwekutangazve uye vakaramba vachikura mune yechinyakare basa. Pasina kutaura kuti iyi indasitiri haisi chaiyo magineti ekusiyana.
Asi vakazviita zvakadaro.
Sei? Mukuvateerera, imhaka yekuti kuda kwavo uye maonero avo ekuona paive nemukana muindastiri iyi waive wakakura kwazvo kupfuura chero kutya kwavanogona kunge vaive nako (Handitozive kana vaitya!). Aisha akazviisa zvakakwana mukupedzisira kiyi yekuparadza… f *** ivo akati. Ini ndakapombwa ndichiteerera izvo nekuti ndizvo zvandaive ndichitaura mukati nguva dzese munhu paanotaura kumashure kwangu nezvedambudziko rangu riri kuuya.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti wechipiri iwe uchizvitsaura pachako kubva kumombe, iwe wakasiyana. Danga rinoda kukudhonzera kumashure. Havadi kuti umhanye kumberi. Vanoda kukubata. Iwe haugone kuvatendera. Luckily for you, kune vamwe vakaita sewe vanozokubatsira. Sezvo ini ndaipedza nguva neshamwari dzangu pa BlogWorld Expo, Ndakaona kuti ndaive pamba nevanhu vaida kuti ndibudirire. Uye ini ndinoda kuti vabudirire, zvakare.
Ndiani arikukutadzisa? Ndinoziva zvaunogona kuvaudza… ingobvunza Aisha.
Mbudzi 7, 2011 na3: 06 PM
Doug, hauna kumbobvira waenda kubhulogi yako, Miss Lori vakanyora pa Twitter saka verenga… uye rangarira kukuona iwe pa #Bwela asi wanga usina chokwadi kuti ndiwe ani. Saka, kusvika padanho, ichi chinoshamisa uye chakavimbika posvo. Ndiri mudiwa anofunga, asi rega kutya kundidzosere kumashure zvakanyanya muhupenyu hwangu. Ini ndichave makumi matatu nemashanu mumazuva mashoma, asi ndanga ndichishanda nesimba mukusiya kutya ikoko kumashure. Ini ndinotenda chaizvo yako post uye zvinogara zvakanaka kuti unzwe vamwe sezvavanopfuura nemumazamu iyoyo. Kutenda murume, uve neakanaka !!
Mbudzi 7, 2011 na3: 08 PM
Ndatenda zvikuru Matt!